7 ciyaarood oo lamid ah Dhexdeenna oo loogu talagalay Android | Androidsis
Ignacio Sala | 01/07/2021 22:00 | Ciyaaraha Android
Haddii aad u maleyneyso in la gaadhay waqtigii ciyaarta la beddeli lahaa, laakiin aad jeceshahay ciyaaraha ka-goynta bulshada, ee Dukaanka Play-ka, waxaannu ku haynaa qaabkeenna kala duwan ciyaaro la mid ah US, ciyaaraha na siiya dejin cusub, jilayaal cusub iyo wixii ka sarreeya, codad kala duwan.
Soo jiidashada ugu weyn ee noocan ah ciyaarta ayaa ah inay yihiin ciyaartoy badan, maadaama ay noo ogolaaneyso la qosol asxaabtaada. Dhamaan ciyaaraha aan hoosta kugu tusinayo, waxay na siinayaan shaqadan sidaa darteed waxaan tabi doonnaa mid ka mid ah howlaha aan u hayno Mareykanka dhexdiisa.
1 Naga aamus
2 Tuhunsaneyaasha: Qarsoodi weyn
4 Magaalada Salem
5 Wakiilka Triple
7 Qarin ^^
Muder na waa ficil ahaan isku mid ah Mareykanka dhexdiisa, laakiin xitaa sidaas oo ay tahay, waxaa soo degsaday in ka badan 10 milyan oo isticmaale oo leh celcelis dhibco ah 4,5 xiddigood 5-ta suurtagal ka dib in ka badan 800.000 dib u eegis, qiimeyn ka sarreysa ciyaartii asalka ahayd ee dhibcaha ay heleen ay ahayd 3,5 xiddigood.
Cinwaankani wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku ciyaarno khadka tooska ah ee internetka ciyaaraha laga bilaabo 6 illaa 20 ciyaartoy. Ciyaartoydu waa inay ilaaliyaan seddexda xaaladood ee cinwaankani na siinayo inta aan ka leexanayno mid ama in ka badan gacan ku dhiigleyaal. Si ka duwan Mareykanka dhexdiisa, Muder wuxuu na siiyaa 4 doorar kala duwan oo ciyaartoydu ciyaari karaan:
Dilaa Gacan ku dhiiglaha, sida magaciisu tilmaamayo, wuxuu masuul ka noqon doonaa inuu ka dhigo tirada ugu badan ee shaqaalaha la waayo iyadoon la helin lana kaashanayo kuwa la socda.
Baare. Waa inaad soo ururisaa dhammaan tilmaamaha lagama maarmaanka u ah si aad u ogaato cidda uu yahay gacan ku dhiigluhu.
Fududee. Gacan ku dhiiglaha ayaa mas'uul ka noqon doona qarinta iyo nadiifinta wadada iyo meydka uu ka tagay gacan ku dhiiglaha si looga fogaado in la ogaado.
Crewman. U xilsaaran fulinta dayactirka markabka iyo helitaanka gacan ku dhiiglaha qarsoon.
Cayaartu waxay noqon kartaa mid guud ama mid khaas ah oo internetka ah. Muder us ayaa diyaar u ah adiga ku soo dejiso bilaash, wuxuu ubaahanyahay Android 4.1 ama kadib, wuxuu soo bandhigayaa xayeysiis iyo wax ku iibsiga barnaamijka oo noo ogolaanaya inaan qaabeyno muuqaalka dabeecadeena.
Tuhunsaneyaasha: Qarsoodi weyn
Tallaabada tuhmanayaasha waxay ka dhacdaa guri weyn, halkaas oo a ugu badnaan 10 ciyaartoy Waa inay xalliyaan qarsoodiga dilka, iyagoo fulinaya hawlo baaris ah si loo helo aqoonsiga gacan ku dhiiglaha, laakiin waa inay ka taxadaraan inuu ku jiro kooxda uuna sameyn doono wax kasta oo suurtagal ah si loo ogaado.
Marka wareeg kasta la dhammeeyo, wareegga codbixinta ayaa bilaabmaya, halkaas oo ciyaartoydu ay sharrax ka bixinayaan doodahooda si ay isugu dayaan inay ku ogaadaan cidda ay rumeysan yihiin inuu yahay gacan ku dhiiglaha cod wada hadal ah oo ay bixiso arjiga.
Tuhun: Meel qarsoodi ah ayaa laga heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, wuxuu u baahan yahay Android 4.4 oo wuxuu dhexgalaa iibsashada abka. Iyadoo in kabadan 400.000 dib u eegis ah, waxay leedahay celcelis qiimeyn ah 4,3 xiddigood 5ta macquul ah.
Developer: Iskudarka Duurjoogta
Bretrayal.io waa ciyaar ciyaartoy badan halkaas oo aan ku xalin karno taas oo ah khiyaanada shaqaalaha. Horyaalkan ayay ku ciyaari karaan 5 ilaa 11 ciyaartoy. Cinwaankani wuxuu leeyahay laba xaaladood oo ay ciyaartu ka dhaceyso: cirifka hawada iyo guriga haadka. Sida ka dhex jirta Mareykanka waxaan u habeyn karnaa muuqaalka dabeecadeena iyada oo loo marayo tiro badan oo ah qalab iyo dhar.
Bretrayal.io waa waa bilaash inaad kala soo baxdo Play Store, waxay u baahan tahay Android 4.4 ama ka sareeya oo ay ku jirto wax ku iibsiga gudaha-app. Waxaan sidoo kale haysannaa nooc loo heli karo daalacashada, taas oo noo ogolaaneysa inaan cinwaankan la ciyaarno asxaabta kale xitaa haddii aysan haysan taleefannada casriga ah ee Android ama ay doonayaan inay si raaxo leh uga sameeyaan kombiyuutarka.
Developer: Dhammaadka Ciyaar Dhex-dhexaad ah, Inc.
Si ka duwan beddelaadaha kale ee ka socda Mareykanka ee aan kugu tusinno qodobkan, Magaalada Salem waa halyeey ka tirsan dukaanka Play-ka, isagoo ka mid ah Ciyaaraha ugu yar ee bulshada laga jaro oo leh saldhig ciyaartoy ka badan 8 milyan.
Tirada ugu badan ee ciyaartoy ka ciyaari kara Magaalada Salem waa 15 jir, sidaa darteed kooxdaada saaxiibadaa aad ayey u badan yihiin mar walbana ma wada ciyaari kartid dhammaan Mareykanka, waa inaad cinwaankaan isku daydaa.
Waxqabadka Magaalada Salem wuxuu ka socdaa magaalo yar, ujeedkeenu waa inaan ilaalino dhamaan deriska (ciyaartooyda) inkasta oo aynaan ogeyn waxyaalaha qarsoon ee qarsoon ee laga heli karo gadaashooda (dhexdhexaad, xubin mooryaan ah, dilal taxane ah ama dab-demiye).
Magaalada Salem, ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxay u baahan tahay Android 4.4 ama ka dib, waxaa ka mid ah xayeysiis iyo wax ku iibsiga barnaamijka. Mid ka mid ah qodobada taban ee cinwaankan ayaa ah inuu ku qoran yahay oo keliya Ingiriis.
Beddel aad u la mid ah Ka mid ah Mareykanka ayaa laga helaa Wakiilka Triple, ciyaar ay ka buuxaan been abuur, khiyaanooyin, aqoonsiyo qarsoon iyo jarista bulshada. Waxay qaadataa oo kaliya hal qalab si ilaa 9 ciyaartoy ugu raaxeysan karaan cinwaankan.
Cayaartu waxay leedahay ugu badnaan 10 daqiiqo, halkaas oo aan noqon karno wakiil ama laba jeer wakiil fayraska. Haddii ay tahay inaan noqonno labada Agende, waa inaan shaki ku beeri ciyaartoyda kale kashifida macluumaadka naga caawinaya inaan qarino aqoonsigeenna. Dhamaadka ciyaarta, mid kasta oo ka mid ah ciyaartoydu waa inuu u codeeyaa si loo ogaado cidda uu yahay wakiilka labbaad.
Wakiilka Triple ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxay u baahan tahay Android 4.1 ama ka sareeya, oo ay ku jiraan xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka.
Developer: Rook dhadhan fiican leh
Wolvesville waxay ka dhacdaa tuulooyin kala duwan, tuulooyin aan ku qasbanahay cayri kuwa ku soo duulay / xoogagga sharka, cinwaan isku daraya badbaado, dagaal iyo khiyaano isku qiyaas ah. Cinwaankan ciyaartoy badani wuxuu oggolaanayaa ugu badnaan 16 ciyaartoy ciyaar kasta.
Cinwaankani wuxuu leeyahay wax ka badan 10 milyan oo soo degsasho ah, celcelis ahaan qiimeynta 4,4 xiddigood 5tii suurtogal ee ku saleysan in ka badan 300.000 qiimeyn. Waxay u baahan tahay Android 4.1 ama ka sareeya, waa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka.
Iyadoo a xadka ugu badan ee 20 ciyaartoy, waxaan kaheleynaa qarsoodi ^^, cinwaan ka duwan kan Mareykanka uu na siiyo. Khadka qarsoon ^^ ayaa ku habboon in shaqsi ahaan loola ciyaaro asxaabta ama qoyska maxaa yeelay waa inaan tixgelinno astaamaha uu mid kasta oo ka mid ah ciyaartoydu sameeyo si loo ogaado cidda uu yahay Mr. White. Cinwaankan waxaa ku jira seddex nooc oo ciyaartoy ah: Muwaadiniin, Dabool iyo Mr. White.
Sidee ayuu u shaqeeyaa 'Undercover ^^'? U sii gudbi mobilada asxaabtaada si ciyaartooy walba u doorto magacooda una helo eray sir ah. Dhammaan Muwaadiniintu waxay heli doonaan isla erayga, Daboolka hoose wuxuu heli doonaa eray xoogaa ka duwan, Mr. White wuxuu heli doonaa ^^ calaamadda.
Intaas ka dib, ciyaartoy kasta waa inuu sharraxaa ereygiisa, halka Mr. White uu hagaajiyo. Qaybta codbixinta, ciyaaryahanka leh eray ka duwan kan aqlabiyadda ayaa noqon doona tuhmanaha ugu weyn. Codsiga ayaa noo sheegi doona, marka ciyaartu dhammaato, yaa mr cad. Haddii aan saxnay, waan guuleysan doonnaa ciyaarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 7 ciyaarood oo lamid ah kuwa naga mid ah ee Android